एपि वानबाट आउने राजेश हमालको “को बन्छ करोडपती” मा रबि लामिछानेले कति जिते ? [हेर्नुहोस भिडियो] — newsparda.com
एपि वानबाट आउने राजेश हमालको “को बन्छ करोडपती” मा रबि लामिछानेले कति जिते ? [हेर्नुहोस भिडियो]
काठमाडौं । को बन्छ करोडपतीको सार्बजनिक भएको एक भिडियोमा डाईलग यस्तो छ । उक्त १५ सेकेण्डको भिडियोमा यो बाहेक केही पनि छैन । लाज पचेका नकचराहरुलाई टुडिखेलमा राखि उडेर, घुमाएर एक, एक, एक हान्न मन छ त्यो पनि नाकको डाडी भाचिने गरेर । पछिल्लो समय नेपालमा रियालिटी शो ‘ को बन्छ करोडपति’ चर्चामा रहेको छ । निकै चर्चामा रहेको यो कार्यक्रमलाई महानायक राजेश हमालले संचालन गर्दै आइरहेका छन्।‘को बन्छ करोडपति’ टेलिभिजन शो मा राजिव जैनले १ करोड रुपैयाँ जितेका छन् । आइतबार शोमा उनले १ करोड रुपैयाँ जितेका थिए । ‘को बन्छ करोडपति’मा १ करोड जित्ने उनी पहिलो सहभागि समेत भएका छन् ।
एपी १ टिभीबाट हरेक शनिवार, आइतवार र सोमबार सांझ ८ः३० बजे प्रशारण हुदै आएको कार्यक्रमलाइ पुर्व मेची देखि पस्चिम महाकाली सम्म सबैले मन पराउने गरेको छन् । कार्यक्रममा बिराट नगरका राजिव जैनले एक करोड जितिसकेका छन् ।एपि वान टेलि भिजनबाट प्रसारित कार्यक्रम ‘को बन्छ करोडपति’मा ‘सिधा कुरा जनता सम्म’ नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेपनि सहभागी भएका छन् । संसार जितेर आफू अगाडी बढ्न खोज्ने र जनतालाई न्याय दिलाउन जस्तोसुकै परिस्थितीमा खडा हुने लामिछाने राष्कोट अस्पताल निर्माण सहयोगार्थको लागि आफू कार्यक्रममा सहभागी भएको उनले आफैले बताएका छन।
को बन्छ करोडपति’मा धेरै चर्चित कलाकार हरु सहभागी भईसकेका छन् । केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध रंगशाला निर्माण सहयोगार्थ भद्रगोल टिम पनि सहभागी भइसकेको छ ।आजको कार्यक्रममा रविले ११ औ प्रश्नको सही जवाफ दिएर ६ लाख ४० हजार रुपैयाँ जितेका छन् । उनले १२ सोधिएको प्रश्नमा काठमाडौमा सवारी साधनलाई कहिलेबाट हर्न बजाउन निषेध गरिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा दुविधा भएर उनले खेललाई छोडेका थिए । क्वीट गरेपछि जम्मा भएको ६ लाख ४० हजार सुरक्षित भएको थियो । उक्त रकम अस्पताल निर्माणका लागि सहयोग गर्ने निर्णय रविले लिएका छन् । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
संसार कै सुन्दर अभिनेत्रीमाथि किन परे दुनियाँको लोभी आँखा
मलाई जिताउँन तपाईहरुको साथ चाहिएको छ, मेरो लागि अन्तिम पटक सेयर गरिदिनु न प्लिज : प्रितम आचार्य
गरीबी र दरिद्रताको अन्त्य गर्न अनिवार्य घरमा रोप्नुहोस् यी दुई बिरुवा, जानकारीको लागि सेयर गरौं